सुदूरपश्चिमबाट राज्यमन्त्री बनेकी आशा विक को हुन् ? – Sidha Prahar
भेमाथाङमा गएको भिषण पहिरोले हेलम्बुका अझै २३ जना बेपत्ता २०७८ जेष्ठ २७, बिहीबार २०:३२ गते
महाकाली नदीले खतरा तह पार गर्‍यो, भोलि दिउँसोसम्मै उच्च सतर्कताका साथ सुरक्षित स्थानमा रहन आग्रह २०७८ जेष्ठ २७, बिहीबार २०:३२ गते
डडेल्धुरा परशुराम नगरपालिकाको सामुदायिक वनमा एक महिलाको शव फेला २०७८ जेष्ठ २७, बिहीबार २०:३२ गते
सप्तरीमा नौ वर्षीया बालिकाको विभत्स हत्या २०७८ जेष्ठ २७, बिहीबार २०:३२ गते
नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप २ हजार ४०१ कोरोना संक्रमण पुष्टि, ३४ जनाको मृत्यु २०७८ जेष्ठ २७, बिहीबार २०:३२ गते
पहिरोले मर्स्याङ्दी नदी थुनिएछि, चामे बजार जोखिममा २०७८ जेष्ठ २७, बिहीबार २०:३२ गते
बझाङमा पहिरोमा पुरिएर एक जनाको मृत्यु २०७८ जेष्ठ २७, बिहीबार २०:३२ गते
खाना नपकाएको भन्दै श्रीमान्द्वरा श्रीमतीको हत्या २०७८ जेष्ठ २७, बिहीबार २०:३२ गते
मेलम्ची खोलामा आएको बाढीले, इलाका प्रहरी कार्यालय हेलम्बुको भवन यसरी ढाल्यो २०७८ जेष्ठ २७, बिहीबार २०:३२ गते
महाकाली प्रादेशिक अस्पतालको बन्द रहेको ओपिडी सेवा सञ्चालन गरिने २०७८ जेष्ठ २७, बिहीबार २०:३२ गते
सुदूरपश्चिमबाट राज्यमन्त्री बनेकी आशा विक को हुन् ?
२०७८ जेष्ठ २७, बिहीबार २०:३२ गते
कैलाली- ७ मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस पटक अधिकांश नयाँ अनुहारलाई मन्त्री बनाएका छन् । ती मध्येका एक हुन् आशा कुमारी विक। उनलाई वन राज्यमन्त्रीको जिम्मेबारी दिईएको छ।
बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिका १ पिमीकी ३९ वर्षीया बिक विघटित प्रतिनिधि सभाको लागि नेकपा एमालेबाट समानुपातिक तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य बनेकी थिइन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको बझाङमा महिला सशक्तिकरण, जातीय छुवाछुट विरुद्धको अभियानमा सक्रिय उनी २०७४ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उनी प्रतिनिधि सदस्य सदस्य बनेकी हुन्।
२०६९ मा नेकपा एमाले बझाङको जिल्ला कमिटी सदस्य भएकी थिइन्। त्यस्तै उनी अखिल नेपाल महिला संघको केन्द्रीय सदस्य तथा जिल्ला इन्चार्ज, नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजको सुदूपश्चिम सदस्य तथा जिल्ला इन्चार्ज रहेकी छन्।
PrevPreviousनागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश जारी
Nextमाओवादी छाडेर एमालेमा प्रवेश गरेकी ज्वाला कुमारी साह, प्रदेशबाट सीधै बनीन् संघीय सरकारको मन्त्रीNext